စီးရပ်စ် (သင်္ကေတ: ; အင်္ဂလိပ်: Ceres; /ˈsɪəriːz/) သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ အသေးငယ်ဆုံးသော ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားဖြစ်ပြီး ပင်မ ဥက္ကာခါးပတ် (asteroid belt) အတွင်းတွင် ရှိသော တစ်ခုတည်းသော ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားဖြစ်သည်။ အဲရစ်ကို ၁၈၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် Giuseppe Piazzi မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အချင်းအားဖြင့် ၉၅၀ ကီလိုမီတာသာ ရှိသဖြင့် စီးရပ်စ်သည် ဥက္ကာခါးပတ်အတွင်းမှ အကြီးဆုံးအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခါးပတ်တစ်ခုလုံး အလေးချိန်၏ သုံးပုံတစ်ပုံမျှရှိသည်။ လတ်တလော လေ့လာမှုများအရ စီးရပ်သည် ပုံသဏ္ဌန်မမှန်ပဲ ဆွဲငင်အားနည်းသော အသေးစားအရာဝတ္တုများကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ လုံးဝန်းသော ပုံသဏ္ဍန်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ သူ၏ အလင်းလက်ဆုံး အချိန်၌ပင်လျှင် သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်ရန် အလွန်မှုန်ဝါးနေသေးသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နာဆာမှ Dawn Mission အာကာသလေ့လာစူးစမ်းရေးယာဉ်ကို စီးရပ်စ် နှင့် ဗက်စ်တာ (Vesta) တို့ကို စူးစမ်းရန်အတွက် လွှတ်တင်ခဲ့သည်။
↑ Schmadel၊ Lutz (2003)။ Dictionary of minor planet names (5th ed.)။ Germany: Springer။ p. 15။ ISBN 978-3-540-00238-3။
↑ Simpson၊ D. P. (1979)။ Cassell's Latin Dictionary (5th ed.)။ London: Cassell Ltd။ p. 883။ ISBN 978-0-304-52257-6။
↑ The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter (3 April 2009)။ 14 May 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (produced with Solex 10 Archived 29 April 2009 at WebCite written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
↑ 1 Ceres။ JPL Small-Body Database Browser။4August 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AstDyS-2 Ceres Synthetic Proper Orbital Elements။ Department of Mathematics, University of Pisa, Italy။5October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ 05. Dawn Explores Ceres Results from the Survey Orbit။5September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ APmag and AngSize generated with Horizons(Ephemeris: Observer Table: Quantities = 9,13,20,29) Archived5October 2011 at WebCite
↑ Angelo, Joseph A., Jr (2006)။ Encyclopedia of Space and Astronomy။ New York: Infobase။ p. 122။ ISBN 0-8160-5330-8။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ Piazzi၊ Giuseppe (1801)။ Risultati delle osservazioni della nuova Stella scoperta il dì 1 gennajo all'Osservatorio Reale di Palermo (Italianဘာသာစကားဖြင့်)။ Palermo။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စီးရပ်စ်_(ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှား)&oldid=730751" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၇:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။